Amacebo oMxholo kunye nokuSebenza koMxholo
Imibuzo emihlanu kwiQhinga lokuSebenzisa uMxholo
NgoMvulo, Julayi 5, 2010 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Ukucima kunye nokuqaphela ukuba ezinye iingcali zosasazo lweendaba ezixelela iinkampani ukuba ayinamsebenzi apho bathatha inxaxheba kwimidiya yoluntu, kuphela ukuba eneneni do. Abanye bathi uphuhliso lwe isicwangciso seendaba zoluntu ngaphambi kokuba iqale.
Kukho imibuzo emihlanu ekufuneka uzibuze yona xa usenza umxholo kwiwebhu:
Umxholo kufuneka ubekwe phi? -Iqonga obeka kulo umxholo kufuneka lenzelwe abantu ekujoliswe kubo onqwenela ukufikelela kubo. Ukuba uzama ukufikelela kubasebenzisi beenjini yokukhangela, qiniseka ukusebenzisa iqonga elilungiselelwe iinjini zokukhangela. Ukuba uzama ukufikelela kubasebenzisi beshishini ukuya kwishishini, qiniseka ukuba ujolise kwinethiwekhi ebonelela amashishini. Ukuba ujonge ukubonelela ngevidiyo ekumgangatho ophezulu, yibeke kwiqonga elinokuthi liyisebenzise.
Umxholo kufuneka ubekwe njani? -Umxholo ukhona ukuqhuba ukugcwala, kwaye ekugqibeleni, ishishini kwinkampani yakho. Ukubeka umxholo wakho ngeefowuni ezomeleleyo ezenzekelayo ezifanelekileyo ekuqhubeni ukuthengisa kubalulekile. Ukuba ubhala i-tweet kwaye ufuna ukuphinda ubhale i-retweet, shiya igumbi ngaphaya kweempawu ezili-140 zabamkeli ngakumbi okanye izimvo.
Nguwuphi umxholo ekufuneka ubekwe? - Umxholo ekufanele utsala ukugcwala kwitrafikhi ngokufanelekileyo unokufuna ukuba usebenze ngakumbi kunesiqulatho esidibanisa amagama aphambili ekufumaneni iinjini. Umxholo ngaphakathi kwincwadi ye-e kufuneka ungancokoli kangako kwaye ubumbeke ngakumbi. Umxholo ngaphakathi kwebhlog kufuneka uchithwe, umfanekiso omelweyo ubandakanyiwe, kunye nesitayile sokubhala sencoko.
Umxholo kufuneka ubekwe nini? -Ukuba ujoliso lwakho kukutsala abantu baye kumnyhadala, cwangcisa ukukhawulezisa umxholo ngaphambi, ngexesha nasemva komsitho wokuwukhuthaza. Ukuba ujoliso lwakho ngabaphulaphuli kushishino, lupapashe ngeentsuku zeveki. Ukwazi ukuba uza kuwupapasha nini umxholo kunganyusa utshintsho lwakho.
Ndihlala ndiwubeka kangaphi umxholo? - ngamanye amaxesha, ukuphinda umyalezo kunokunyusa uguquko ngokubanzi. Ngamanye amaxesha ukubhala kube kanye ngenyanga ngesihloko esithile kunokukhokelela ekuphuculeni amaxabiso okufumana kunokuba ubhale kube kanye kwaye uyeke. Musa ukoyika ukuziphinda. Iindwendwe ezibuyayo ziyalibala (okanye zifuna isikhumbuzi) kwaye iindwendwe ezintsha zisenokungawuboni umyalezo ngaphambili.
Ukulahla umxholo ngaphandle kwewebhu ngaphandle kwesicwangciso kunokukufumanela iziphumo kodwa akuyi kulungiselela kwaye kusebenze ngokupheleleyo umsebenzi owenzayo. Kunzima ngokwaneleyo ukuphuhlisa umxholo owenza ifuthe-qiniseka ukuba uphendula imibuzo ethile kumxholo owubhalayo endaweni yokulahla nje.
tags: ukusayina incwadiumvuzo ongenayoIngxelo yomsebenzisiizimvo zomsebenzisi
Njani kwaye kutheni ubhala incwadi
Isiqulatho seMxholo sokwakha iThemba